Nnipa a wɔkaa wɔn hyɛɛ mu wɔ Beslan Sukuu mu—‘Onyankopɔn Da So Kura Yɛn Mu’
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Zulu
NATALYA ne ne babarima Aslan a wɔadi mfe nkron ne Zarina ne ne babaa Anzhelika a wɔadi mfe dumienu amoa wɔn ho hyɛ baabi. Mmofra ne mpanin bɛboro 1,000 nso te nkyɛn baabi, na nnipabɔnefo bi kurakura atuo gyina wɔn so.
Na da no yɛ Wukuda, September 1, 2004. Na wɔabue sukuu ma awofo de wɔn mma aba sukuu bi a ɛwɔ Beslan. Ɛyɛ kurow ketewa bi a ɛwɔ Alania, Russia. Afei obiara anhu nea ɛyɛe, nnipa bɛboro 30 a wɔkurakura tuo de mmirika baa hɔ, na wɔfii ase teɛteɛm totoo atuo guu wim. Nnipabɔnefo yi kaa awofo ne wɔn mma no guu sukuu dan bi mu, na wɔde atopae hyehyɛɛ dan no ho hyiae.
Nneɛma Gyee Nsam
Anzhelika ka wɔn a wɔwui no ho
Bɛyɛ nnansa na aban asraafo ne nnipabɔnefo no gu so retwe. Bere a asɛm yi sii no, na Natalya ne Yehowa Adansefo resua Bible. Ɔkaa sɛ: “Na memmɔɔ mpae saa da wɔ m’asetenam.”
Ná ɛyɛ ahohurubere, na na dan a wɔaka wɔn ahyɛ mu no mu ayɛ hye. Ade kyee no, nsɛmmɔnedifo no amma wɔn aduane anaa nsuo. Ne nnansa so a ɛyɛ Fida no, ebinom fii ase dwonsɔ nomee, na wɔwee nhwiren a mmofra no de abrɛ wɔn atikyafo no. Natalya kaa sɛ, “Na abarimaa bi te yɛn nkyɛn, na ɔpan ahaban baako maa me. Ɛnna me nso metee mu mmienu de fã maa Anzhelika de nea aka maa Aslan.”
Afei deɛ, nneɛma gyee nsam. Natalya kaa sɛ: “Prɛko pɛ na topae gyaa mu, na na menyɛ nna wɔ fam. Wisie kumɔɔ hyɛɛ hɔ ma, na atuo fii ase dii ahim.” Bere a asogyafo ne nsɛmmɔnedifo no de sii ani no, Natalya ne Aslan wiawiaa fam kɔpɛɛ baabi hyɛe. Ossetiani bi a wɔfrɛ no Alan twee wɔn fii hɔ ma wɔnyaa wɔn ti didii mu. Nanso ɛnyɛ obiara na ɔnyaa no saa.
Mpanin ne mmofra pii wuwui, na Anzhelika nso hweree ne nkwa. Ɛno akyi no, Beslan kurow no dane butui; baabiara a wobɛfa biara, osu ne agyaadwo nko ara! Natalya fie ne sukuu no di nhwɛanim. Akyiri yi, aban sii sukuu dan foforo wɔ nkyɛn baabi, nanso na Aslan ntumi nkɔ hɔ. Na ɔntumi mpue nkɔdi agorɔ mpo. Natalya kaa sɛ: “Yɛsrɛɛ Yehowa sɛ ɔmmoa Aslan na ehu no mfi ne mu.” Nkakrankakra, ɔnyaa akokoduru san kɔɔ sukuu.
Ade a na ɛyɛ den ma Natalya paa ne sɛ ɔbɛkɔ Ahenni Asa so. Ɔkaa sɛ: “Sɛ me ne nnipa pii wɔ dan mu a, na ɛyɛ me sɛ nsɛmmɔnedifo rebɛtow ahyɛ yɛn so. Ɛba saa a, mebɔ mpae sɛ mma hwee nsi. Akyiri yi, megyaa Ahenni Asa so kɔ koraa. Nea ɛsan bɛtɔɔ mu koraa ne sɛ, sɛ mekae sɛ nnipa pii awuwu ma yɛanya yɛn ti adidi mu a, na agya me kɔdaanna.”
Nea Aboa Yɛn
Natalya kaa sɛ: “Meda asafo no mufo ase sɛ wɔakɔ so aboa me abɛsi seesei. Na Ɔdansefo bi a wɔfrɛ no Tatyana bɛsra me nnansa biara. Akyiri yi mpo deɛ, ɔde Ɔdansefo bi a ɔde Ulyana kaa ne ho bae. Saa maame no nim Bible mu yie, ne yam ye, ɔwɔ ntease, na ɔkasa bɔkɔɔ. Ɔkamfoo me sɛ merebɔ me ho mmɔden paa, na merekasa nso a, ɔyɛ aso tie.
“Seesei metumi ka nea ɛsii a mensuro, na menni ho yaw bio”
“Ulyana maa mehuu sɛ Paulo nso huu amane wɔ Asia. Afei ɔne me kenkan ɔsomafo no asɛm a ɛwɔ 2 Korintofoɔ 1:9 no. Paul kaa sɛ: ‘Yɛtee nka yɛn mu sɛ yɛawu awie.’ Ɔsan kenkan Yesaia 40:31. Ɛhɔ ka sɛ: ‘Wɔn a wɔde wɔn ho to Yehowa soɔ no bɛnya ahoɔden foforɔ. Wɔde ntaban bɛtu sɛ akɔdeɛ.’ Kyerɛwnsɛm a ɛtete saa ne mmoa foforo a Ulyana de maa me no hyɛɛ me den ma me ne me mma no san kɔɔ Kristofo nhyiam bio. Ɛno mpo no, mekɔdu dan no mu a, na me ho yera me.”
Akyiri yi, Zarina bɛyɛɛ Yehowa Danseni, na ɔhwɛ kwan denneennen sɛ owusɔre mu no, ɔbɛhu Anzhelika na wama no akwaaba. Saa bere no, na Onyankopɔn Ahenni anaa aban redi adeɛ, na asase so bɛyɛ fɛfɛɛfɛ kama ma asomdwoe aba baabiara. (Mateo 6:9, 10; Asomafoɔ Nnwuma 24:15) Wɔbɔɔ Natalya ne ne mma asu afe 2009 mu. Wɔda so ara te bɛn sukuu no, nanso ehu no afi wɔn mu. Natalya ka sɛ: “Seesei metumi ka nea ɛsii a mensuro, na menni ho yaw bio. Onyankopɔn da so ara kurakura yɛn mu.”
Nsɛmmɔnedifo: Bɛboro 30
Nnipa a na Wɔhyɛ Dan no Mu: Bɛboro 1,000
Wɔn a Wɔwuwui: Bɛyɛ 330
Wɔn a Wɔpirapirae: Bɛboro 700
Bible ma yehu nneɛma mmiɛnsa bi a ɛma adesamma hu amane.